Dhambaalka Wasiirka | Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare
Mudane Ducaale Aadam Maxamed
Wasiirka Hiddaha & Tacliinta Sare
Ku soo dhowow Wasaaradda Hiddaha & Tacliinta Sare oo xarigga ka jartay buug iyo bar internet oo ka warbixinaya Wasaaradda iyo waxqabadkeeda. Waa tallaabadii ugu horreysay ee nooceeda ah ee ay Wasaaraddu sameyso sanooyinkii ugu damabeeyay. Buugga iyo barta internetka waxaa loogu talo galay inay ka warbixiyaan Wasaaradda iyo howlaha loo igmaday si shacabka Soomaaliyeed iyo inta kale ee daneysa waxbarashada sare ee Soomaaliya ay ugu sahlanaato inay wax ka ogaadaan howlaha Wasaaradda iyo la-xiriirkeedaba.
Wasaaraddu waxay mas’uul ka tahay dajinta iyo hirgelinta siyaasadaha qaranka ee la xiriira tacliinta sare, hiddaha iyo dhaqanka iyo cilmi-baarista. Waxaan wada ognahay in tacliintu lagama-maarmaan u tahay horumarka dal kasta.
Iyadoo garwaaqsan baahidaasi, ayaa Xukuumadda Soomaaliyeed waxay dareensan tahay muhiimadda ay leedahay tacliinta sare iyo kaalinta ay cayaarayaan goobaha waxbarashada sare inkastoo ay jiraan duruufo kala duwan. Waxaan u ballanqaadeynaa in Xukuumaddu ay ku garab taagan tahay dadaalkooda ay ku bixinayaan inay waxbarasho tayo leh siiyaan shacabka Soomaaliyeed.
Howsha ay Wasaaraddu haysto waxaa kaloo ka mid ah inay ilaaliso, isla markaana horumariso hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale ka taageereynaa in dalka laga sameeyo cilmi-baarisyo heer sare ah iyo hal-abuurro kala duwan oo horumarinaya dalka.
Ugu dambeyntii Wasaaraddu waxay soo dhoweyneysaa cid kasta oo gacan ka geysaneysa sidii loo ballaarin lahaa fursadaha waxbarashada sare, horumarinta hiddaha iyo dhaqanka iyo cilmi-baarista. Waxaan rajeynayaa in shaqaalaha Wasaaraddu ay ka dhabeyn doonaan, sarena u qaadi doonaan adeeggooda.